Ukubuyekezwa kwe-smartwatch ye-AUKEY LS02 neshaja ye-Aircore 15W | Izindaba zegajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | 14/07/2021 18:00 | Izibuyekezo
Namuhla sikhuluma nawe ku-Androidsis mayelana imikhiqizo emibili ehluke kakhulu kepha kunokuthile okufanayo. Zivela kumkhiqizi ofanayo, AUKEY, futhi ngamunye emkhakheni wabo uzama ukunikela ngokufanayo, umkhiqizo we ukusebenza okuhle ngentengo engabizi. I-AUKEY isivele ingaphezu kokwanele eyaziwa emkhakheni wezobuchwepheshe ngokunikela okukhulu uhla lwezesekeli nemikhiqizo ye-smartphone.
Kulokhu sibheka ezimbili zazo. Sikwazile ukuvivinya i- i-smartwatch i-AUKEY LS02 futhi i ishaja ngocingo I-Aircore 15W. Imikhiqizo emibili efinyelela emakethe ukuthi ibe enye ehlukile kokungenamkhawulo kwamathuba esiwathola emakethe.
1 I-AUKEY nemikhiqizo yayo kusezingeni eliphezulu lomsebenzi
2.1 Idizayini ye-LS02 smartwatch
3 Izici ze-AUKEY LS02
4 I-AUKEY Aircore 15W Ishaja engenantambo
I-AUKEY nemikhiqizo yayo kusezingeni eliphezulu lomsebenzi
Inkampani ye-AUKEY izama ukufeza lokho bonke abakunikezayo imikhiqizo yekhwalithi ngamanani amahle. Sibe nenhlanhla yokuhlola imikhiqizo eminingana evela kulo mkhiqizi, futhi ngokujwayelekile sithole ukuqeda okuhle nezici zezinga. Namuhla sizokhuluma ngakho imikhiqizo emibili eyabelana ngaleli filosofi lomkhiqizo.
Lapho sithatha isinqumo nge-smartwatch sibheka izici eziningana. Intengo, izinzuzo ukuthi ikunikezani nokuthi yini ukwakheka ekhanga kithi. Singazicabangela lezi zimo ezifanayo kunoma ikuphi ukuthengwa. Kungakho namuhla sibheka ifayili le- i-smartwatch i-AUKEY LS02 nakushaja engenantambo I-Aircore 15W.
Sibhekene nemodeli ye-smartwatch iyasebenza njengoba ihlakaniphile. Idivayisi ukuthi akuhehi ukunakwa ngomklamo wayo wokuba nizithibe. Kungase kungabonakali esihlakaleni sakho. Kepha kuyasinikeza ukusebenza okukhulu nokusebenza ukufanisa yamanye amamodeli amaningi entengo ephakeme kakhulu.
Idizayini ye-LS02 smartwatch
Njengoba besikutshela, I-LS02 ka-AUKEY Kuwashi lalabo abangafisi ukudonsela ukunakwa. Ngosayizi "ojwayelekile" ayinabucayi bobunjwa noma imibala, kepha lokhu akuphikisani ne- idizayini encane nenhle. I-smartwatch ene-aci-hasis yensimbi enobunxande obunompunga kumnyama lapho kufanelana khona Isikrini esingu-1 intshi.
Kuye Uhlangothi lwesokudla itholakele inkinobho yayo yomzimba kuphela ngemisebenzi eminingi yokusebenza kwayo njengekhaya, noma ukuvula / ukuvala.
Ku ngemuva sithole ifayela le- izinga lokushaya kwenhliziyo sikwazi ukwenza izilinganiso eziqhubekayo ngenkathi sinaso esihlakaleni. Izilinganiso ezisheshayo nezinokwethenjelwa, njengoba sikwazile ukuqhathanisa namanye amadivayisi. Okuthile okuwusizo ikakhulukazi uma kukhulunywa ngemisebenzi yezemidlalo. Futhi ngemuva kwayo sithola ifayela le- Izikhonkwane zamagnetic zokushaja ibhethri.
Mbambeni UKEY LS02 kuwebhusayithi esemthethweni enesaphulelo esingu-10%
Ibhande kungenye yamaphuzu akhe aqondayo. Ngobubanzi ngokobungako besikrini, ku matte omnyama. Kepha ngokuthinta okujabulisa kakhulu futhi a ikhwalithi engaphezulu kwesilinganiso uma siqhathanisa namanye amamodeli esikwazile ukuwahlola.
Izici ze-AUKEY LS02
Isikhathi sokubheka yonke into lokho i-AUKEY LS02 ekwazi ukusinikeza khona. Kufanele sikhumbule ukuthi sibhekene ithuluzi esingalibheka njengolonga imali uma siqhathanisa namanye amamodeli. Kepha lokhu kuyinto esebenza ngokuxhasa i-LS02 inikezwe izinzuzo ezinazo.
Ukuqala ngesikrini sakho, a Iphaneli le-TFT elinokuhlukaniswa kwamasentimitha angu-1,4 futhi nge Isixazululo esingu-320 x 320 dpi, ngaphezulu kokwanele lo sayizi. Kubukeka kukuhle ngisho nasezimeni zokukhanya kwelanga. Futhi ine izilungiselelo zeleveli yokukhanya futhi singakhetha izinhlobo ezi-4 zokukhanya. Okuthile okushoda kwamanye amadivayisi amaningi.
Isikhathi singesinye sezikhwepha ze-AUKEY LS02. Kuzozwana ngokumangalisayo nge-smartphone yakho, futhi ngeke kube khona isaziso sokuthi ungaphuthelwa. Ungahlela izaziso ezihlakaniphile izingcingo, funda imiyalezo esibukweni ngisho nokwenza kusebenze izaziso ezivela kumanethiwekhi wakho owathandayo omphakathi.
Un umlingani ofanele ukwenza umdlalo wakho owuthandayo ukulawula ukudlala komculo kusuka esihlakaleni sakho. Enye yemininingwane ebalulekile ukuthi i-AUKEY LS02 empeleni isisindo esincane, ngeke uqaphele ukuthi uyigqokile. Siyathola izindlela ezifika kwezili-12 zezemidlalo ongakwazi ukuqapha ukuphatha i ukulawula amakhalori akho asetshenzisiwe noma amakhilomitha athuthukile. Setha izinhloso nenqubekela phambili futhi uzuze izinselelo.
Ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuthi iwashi lakho lilimale izithukuthuku noma amanzi. Izici ze-AUKEY LS02 Ukuqinisekiswa kwe-IP68 ukumelana nothuli namanzi. Imelana namazinga okushisa aphakathi kuka -20º no-45º. Thenga i-smartwatch ye-AUKEY manje I-LS02 ngesaphulelo kuwebhusayithi yayo.
Futhi kwesinye sezici abasebenzisi abazazisa kakhulu, i- impilo yebhethri, ibuye ilinganise. I-AUKEY LS02 inikeza a ukuzimela kuze kube yizinsuku ezingama-20 zokusetshenziswa. Uzokhohlwa ngokuphelele lapho ushiye khona ishaja ye-smartwatch. Ngokungangabazeki, ngenxa yezizathu eziningi, i-AUKEY LS02 iyi-smartwatch okufanele icatshangwe.
I-AUKEY Aircore 15W Ishaja engenantambo
Njengoba sishilo ekuqaleni kwalokhu okuthunyelwe, i-AUKEY yaziwa umhlaba wonke ngenani lezesekeli elizenzela amadivayisi wethu weselula. Futhi singakusho lokho izesekeli zokushaja ziphakathi kwezinto ezikhiqizwa kakhulu futhi ithengiswe emhlabeni jikelele. Kulokhu sithola ishaja yamagnetic wireless ilusizo njengoba inhle.
Singakutsheli okuncane ngokuklanywa kweshaja. Kulokhu, kunjalo ishaja ekhethekile engenantambo ngefomethi yayo nangokusebenziseka kwezinto ezinikezwayo. Inesimo esiyindilinga nosayizi omncane kakhulu nokushuba. Kungaba ishaja yethu ejwayelekile ngisho "nokuphatha". Iyashesha, ikhululekile ukusebenzisa futhi ayibizi, impela inketho ethokozisayo. Thenga manje kuwebhusayithi ye-AUKEY ngentengo enhle kakhulu
U-AUKEY usiletha umqondo omusha weshaja engenantambo enozibuthe. I-Aircore 15W iyi- ngokucacile liphefumulelwe amashaja amasha eyenzelwe i-Apple ye-iPhone 12, ebizwa MagSafe. Hhayi kuphela ukuthi singashaja ama-smartphones ethu ahambisana nokushaja okungenantambo ngawo. Futhi Singayisebenzisa ngenkathi ibhethri ishaja ngokuyibamba phakathi kwezandla zethu ngaphandle kokunqamula ishaja.
I-Akhawunti nge Isitifiketi sokushaja okungenantambo kwe-Qi kuze kufike ku-15W. Singashaja noma iyiphi idivayisi ehambisanayo njengama-smartphone, ama-headphone noma ama-smartwatches. Ngaphandle kwalokho, eyakhe 1,2 wamamitha ubude, ikhebula lefomethi yohlobo C lwe-USB, yenza ukusetshenziswa kwayo kungakhululeki ngenkathi sikuxhuma emandleni noma ethekwini elithile lekhompyutha yethu.
Uma usuvele uthathe isinqumo sokuthenga ishaja engenantambo, thola i-AUKEY Aircore 15W lapha kuwebhusayithi yakho futhi ujabulele ukulisebenzisa.
Ishaja ye-Aircore 15W ifaka ipheIndawo yamagnetic otente ezobamba idivayisi ngaphandle kokuyidedela noma ngabe siyayihambisa noma siyiphethe ngezandla. Okubalulekile kwemvelo kusuka amashaja lokuqala wireless nobani, njengoba sesiphawulile, kudingeke ukuthi sishiye amafoni ethu singakwazi ukuwasebenzisa.
Imininingwane ebalulekile okufanele uyikhumbule yilokho asikwazi ukuthola i-adaptha yamandla ebhokisini leshaja. Futhi kufanele sikwazi lokho ukuze i-Aircore isebenze ngokugcwele futhi ufinyelele isivinini sayo sokushaja esiphezulu, i-15W sizodinga i-adaptha yenethiwekhi phakathi kwe-18W noma i-20W.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Ukuhlaziywa kweshaja ye-AUKEY LS02 smartwatch ne-Aircore 15W